जानीजानी किन लम्ब्याइन्छ ‘फ्लाइट’ ? | गृहपृष्ठ
Home अन्तरराष्ट्रिय जानीजानी किन लम्ब्याइन्छ ‘फ्लाइट’ ?
on: April 15, 2019 अन्तरराष्ट्रिय
काठमाडौं । सन् १९६० को दशकमा अमेरिकाको न्यूयोर्कबाट लस एन्जल्ससम्म हवाई यात्रा गर्न ५ घण्टा मात्रै लाग्थ्यो । अनि न्यूयोर्कबाट वाशिङ्टन डीसीसम्मको हवाई यात्रा ४५ मिनेटमै पूरा हुन्थ्यो । तर, हिजोआज न्यूयोर्कदेखि लस एन्जल्ससम्म हवाई यात्रा गर्न ६ घण्टाभन्दा बढी समय लाग्छ । न्यूयोर्कदेखि वाशिङ्टन डीसी पुग्न पनि ७५ मिनेट लाग्छ । पहिला जहाँ थियो विमानस्थल अहिले पनि त्यहीँ नै छ । विमानस्थल कतै सरेको छैन । तर, हवाई यात्राको समय भने लम्बिएको छ । हवाई यात्रा किन यसरी लम्बिँदै छन् ? तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ ?
यसरी उडानको समय लामो बनाउने प्रक्रियालाई ‘सेड्युल क्रिप’ वा प्याडिङ भनिन्छ । हरेक वायु सेवा कम्पनीहरूले यसलाई गोप्य राख्दै आएका छन् । कुनै ‘ए’ स्थानबाट ‘बी’ स्थानसम्म पुग्न अलि बढी समय लगाउने प्रक्रिया नै प्याडिङ हो । शुरूशुरूमा उडान नियमित रूपमा ढिला हुन्थ्यो र यस्तो गरिन्थ्यो । तर, पछिल्ला केही दशकमा भने उडानमा हुने ढिलाइ सुधार्न भन्दा पनि कम्पनीहरूले थाहा पाईपाई उडान नै ढिला गर्ने नीति लिएका छन् । यो झट्ट हेर्दा यात्रुहरूको लागि खासै हानिकार दैखिँदैन । ढिलै विमान उडे पनि समयमै गन्तव्यमा पुगेको देखेर उनीहरू आश्चर्यचकित हुन्छन् । तर, विश्वभर देखिँदै आएको यो प्रवृत्तिका कारण वातावरणीय जोखिम लगायत अनेकौं समस्या उत्पन्न भएका छन् ।
पहिलो यात्रा लम्बिरहेको छ । समयमै आइपुगेको भ्रम सृजना भइरहेको छ । आपूmलाई प्रभावकारी र कुशल बनाउनुपर्ने दबाब कम्पनीहरूमाथि परेको छैन । अनि सबैभन्दा चिन्ताजनक भने हवाई ट्राफिक र कार्बन उत्सर्जन बढिरहेको छ । ‘प्याडिङ हुँदाहुँदै पनि औसतमा ३० प्रतिशत विमान हरेक दिन १५ मिनेटभन्दा धेरै ढिलो गन्तव्यमा पुग्ने गरेका छन्,’ अमेरिकी यातायात मन्त्रालयको हवाई यात्रासम्बन्धी एक प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै हवाई परामर्शदाता कम्पनी एएचटी ग्रूपका अध्यक्ष माइकल बाइअडाले बताए ।
प्याडिङका कारण हवाई सेवामा सुधार नभए पनि यसले अनटाइम अराइभलको दर भने बढाएको छ । जानीजानी उडान लम्बाएर कम्पनीहरूले यात्रुहरूलाई मूर्ख बनाइरहेको बाइअडाको भनाइ छ । यसो गर्नुको सट्टा विमान कम्पनीहरूले सेवा सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधान गरेको भए यात्रुहरूलाई धेरै लाभ मिल्थ्यो । यात्रुहरूले समयनिष्ठता (पङचुआलिटी) लाई बढी महŒव दिन्छन् भन्ने कुरा कम्पनीहरूले बुझेका छन् । समयमै आइपुग्दा यात्रु र कम्पनी दुवैलाई लाभ हुन्छ भने उडान समय लम्ब्याउनुको सट्टा कम्पनीहरूले सेवालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ किन काम गर्दैनन् ?
विमान चाँडै उडे पनि समस्या आउँछ ढिला उडे पनि समस्या आउँछ । हवाई कम्पनीहरूले उडान थप प्रभावकारी होस् भनेर प्रविधिमा अर्बौं डलर खर्चिरहेका छन् । तर, उडानमा हुने ढिलाइमा भने खासै सुधार भइरहेको छैन । ढिलाइ विभिन्न कारणले हुन सक्छ । तर, यसमध्ये ८० प्रतिशत ढिलाइमा भने सेड्युल, अवतरणको पर्खाइमा बसेका विमानको लाइन, विमानको उपलब्धता, मर्मत लगायत कयौं कारण छन् । तर, एकपटक विमान उडेपछि जेजे समस्या आए पनि त्यसको समाधानको जिम्मा हवाई ट्राफिक नियन्त्रकमाथि छोड्ने गरेको पाइएको छ ।
।लाइटको सेड्युल मिलाउने काम कम्पनीले गर्छ । तर, यसमा कहिलेकाहिँ मौसम, हवाई ट्राफिक, कम्पनीको सञ्जालमा हुने अवरोधले पनि प्रभाव पार्न सक्छ । धेरैजसो कम्पनीले विमानस्थलमा पर्याप्त विमानको आवागमन सुनिश्चित गर्न उडान समय लम्ब्याउँछन् । यो समस्या समाधानको अर्को विकल्प उडान संख्या घटाउने हो । तर, यात्रुको मागअनुरूप उडान त गर्नै प¥यो । फेरि उडान थोरै भएपछि हवाई भाडा पनि त बढ्छ । त्यसैले ‘नहुने मामाभन्दा कानो मामा वेश’ भनेझैं उडान नै नहुनु भन्दा त ढिलै हुनु वा अलिक लामो समय खर्चेर यात्रा गर्नु नै ठिक हो नि । होइन र ?
त्यसो भए समस्याको समाधान के त ? हवाई ट्राफिक नियन्त्रणको आधुनिकीकरणले समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता छ । अधिकांश ढिलाइ हवाई ट्राफिक नियन्त्रणमा देखिएका समस्याका कारण भइरहेको गुनासो कम्पनीहरूको छ । सन् २००७ यता हवाई ट्राफिक नियन्त्रणका कारण हुने ढिलाइ कम गर्न अर्बौं डलर खर्च भएका छन् । यसले त्यस्ता ढिलाइ पनि आधा घटाएको छ । तर, त्यसयता विमान कम्पनीका कारण हुने ढिलाइ भने ह्वात्तै बढेको छ । अहिले कम्पनीहरूमाथि लागत कटौती गर्ने, मुनाफा बढाउने अनि उडानका कारण हुने वातावरणीय प्रभाव कम गर्ने दबाब छ ।
हवाई ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि बिजनेश बेस्ड फ्लो म्यानेजमेन्ट (बीबीएफएम) प्रणाली अघि सारिएको थियो । सन् २०१२ मा यसलाई चार उद्योग र शैक्षिक निकायले परीक्षण गरेका थिए । उक्त परीक्षण पाँच विमानस्थलमा गरिएको थियो । परीक्षण समग्रमा हुने ढिलाइ, इन्धन खपत, आवाज, कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन कम गर्न सफल भएको थियो । समस्या समाधानका लागि कम्पनीले प्रयास नगरेको भने होइन । एयरलाइन्सले यसअघि नयाँ प्रविधिको लागि उल्लेख्य रकम खर्च गरेका छन् । विश्वव्यापी हवाई ट्राफिक नियन्त्रण आधुनिकीकरण भर्खर शुरू भएको छ । यसले भविष्यमा स्थिति सुधार्छ कि भन्ने आशा भने जगाएको छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)